Anti-dandruff Shampoo nezinye izindlela zokunqanda isifo
Dandruff - kuba isifo ekhanda, okuyinto lihlotshaniswa kahle cell yokuvuselela, ngoba lokhu yakha isamba ngokweqile ishq efile, okusalayo phezu izinwele futhi kuvele njengamadiski ishq emhlophe. Lesi sifo wonke umuntu ongaphansi kweminyaka engu-iminyaka eyishumi nambili mahlanu. Kusukela ngineminyaka engu-nambili, anda ukukhiqizwa sebum futhi dandruff kwenzeka kaningi. Ngemva isifo amahlanu lingaphansi ezivamile, ngoba ngeminyaka, inani sebum iba ngaphansi.
Ukususa dandruff ngempela anganikeza ukuphathwa amashampu kuphela, hhayi yezimonyo, ukukhangisa, okuyinto kwesinye isikhathi wezwa ku-TV. Lungile anti-dandruff imoto equkethe ketoconazole (into okuyinto kahle elwa fungal ukutheleleka) futhi sodium laureth sulfate (ngokuvamile okuthiwa i-sodium lauryl ether sulfate). Uma ukhetha okungalungile imoto anti-dandruff, ngeke bakwazi iwukudambisa ukhunta, kodwa kudale isimo sokungqubuzana ukuntula ishq amahora ambalwa noma izinsuku kuphela, bese lesi sifo izovela futhi. Anti-dandruff Shampoo kungcono ukukhetha ukungahlali ngokwabo, kodwa uye kudokotela uyofuna icebiso-trichologist.
Ukuqeda dandruff, udinga ukukhetha hhayi kuphela ilungelo, ukuya imoto, kodwa futhi ukuthatha B amavithamini bese uzama ukuba adle ngendlela efanele, ukudla okunempilo. Njengoba impi yokulwa nesifo kubalulekile ukusebenzisa ukwelashwa eziyinkimbinkimbi. Ngenxa ngaphezu sebum, imbangela dandruff kungacindezela amanzi kanzima futhi ukuntuleka kwamavithamini.
Kunezindlela eziningana izincomo eyokusiza. Ngokwesibonelo, uma ujwayele ukugeza izinwele zakho, dandruff izovela kancane njalo. Futhi lapho kungasizi ephulukisa imoto, ungazama Tar amashampu, badinga ozofakwa ekhanda imizuzu emihlanu kuya kweyishumi bese ugeze off. Kubalulekile ubambe imoto ngokumelene dandruff ekhanda, hhayi basuse ngokushesha. Akubalulekile isikhathi ngasinye ukusebenzisa ithuluzi ekhethekile, udinga ukunikeza izinwele zakho ukuphumula futhi ugeze izinwele zakho nge imoto njalo. Ukuze andise umphumela agent zokwelapha zingabekwa cap on izinwele futhi yaphakanyiswa khona njengendaba buso ihora. Enye usizo soaping izinwele imoto kabili futhi ikhanda massage ne-ejenti zokwelapha. Njengoba sezingubo, labo abaphethwe dandruff, kungenzeka ukusebenzisa decoction of Thyme (endaweni Ingxenye 2 wezipuni Thyme ingilazi yamanzi). Ukuze ukuthambisa futhi bushelelezi esikalini izinwele, kungenzeka ukugeza ikhanda njengoba imaski ukusebenzisa uwoyela efudumele. Uma uhlale elangeni kakhulu njalo, lo UV sizothinta isikhumba njengenhlangano eqeda ukuvuvukala, kodwa Ungeqisi it, futhi uhlale elangeni kakhulu kwehora. Futhi uzame ehlise, ngoba kungabangela Ukuwohloka sezinwele.
Anti-dandruff Shampoo - hhayi into kuphela engasiza. Zikhona izindlela eziningi ezithandwayo ezisiza isifo mpi. Lezi zinto zihlanganisa azenze burdock namafutha ocolisekileyo, a decoction of izimbabazane, buso nge Aloe juice noma yogurt. Ukuze ukhethe ikhambi dandruff, ungazama zokupheka yendabuko ehlukile, bese unquma ukuthi yiliphi ilungelo manje.
Ethempelini aphuce abane uhlobo: kwekhanda ethile
Kwekhanda isitayela ngesiGreki ngezandla zakhe zonke izinhlobo izinwele
Indlela yokwenza ephezulu umsila ngokushesha futhi kahle?
Umbandamu e Cats: Izimpawu kanye Ukwelashwa
Garfield 2 Watch Online
Okusho: igama Snezana nakho konke mayelana nakho
Cumin - isinongo imithi
Futhi niyazi ukuthi ziwusizo itiye eluhlaza?
Isivinini Inkomba amathayi - i Isikhombisi esibalulekile Ukukhetha
Ukuthobisa abesifazane abakhulelwe
Nokomisa ngoba imifino nezithelo ngezandla zakhe. Dryer imbala
Kuyini Radiocarbon Dating?